Kudya Kunokubatsira Kuderedza Cholesterol Yako | Bezzia
Toñy Torres | 12/05/2021 23:55 | Matipi ehutano, Utano
Zvikafu izvo zvinoshandiswa zvinoita basa rakakosha kana zvasvika pakudzikisa cholesterol. Nenzira imwecheteyo yekuti kune zvekudya zvinomutsa cholesterol, kune zvimwe zvakawanda zvinobatsira kudzikisa. Pamwe pamwe nekugara uchirovedza muviri, kumwe kuchinja kwekudya, uye mimwe miitiro ine hutano, zvinokwanisika kugadzirisa hutano uye kudzikisa cholesterol mwero.
Pano tinokuudza kuti ndezvipi izvo zvekudya zvaunofanirwa kupinza mune yako dhayeti kana iwe uchida kudzikisa cholesterol mwero. Zvisinei, zvakakosha kuti iwe utevere zvakarayirwa nachiremba wako kuti nyaya iyi inyatso kudzorwa. Zvino hongu, ngatione ndezvipi zvekudya zvaunofanira kudya uye kangani kudzikisa cholesterol.
1 Zvikafu zvinodzikisa cholesterol
1.1 Michero yakaomeswa
1.3 Omega-3 mafuta acids
Zvikafu zvinodzikisa cholesterol
Cholesterol iri mumuviri zvakasikwa, chinhu chine basa rekugadzirisa mamwe mabasa uye mahormone uye saka, zvakafanira. Zvisinei, kana cholesterol yemuropa iri pamusoro pezvinonzi zvakajairwa, inogona kuve iri kukonzera matambudziko akasiyana siyana nezvirwere zvemwoyo. Chikafu mune ino kiyi yakakosha kune hutano hwakanaka kana husina kunaka.
Muchokwadi, chinhu chekutanga kuchinja kana dambudziko recholesterol rikaonekwa nderekudya. Maererano nenyanzvi, kudya kwakaringana, dzidzira mitambo nguva dzose uye tora mararamiro ane hutano, akakwana kudzivirira huwandu hwakawanda hwecholesterol muropa. Iwe unoda kuziva kuti izvo zvikafu ndezvipi uye nemabatiro aunofanira kuzviunza mune kwako kudya? Tichakuudza ipapo.
Kunyangwe ichive chikafu chakapfuma mumafuta, nzungu mutongi ane simba emazinga echolesterol muropa. Kuwedzera pakuve yakafuma mu polyunsaturated fatty acids, Nuts ndeyechisikirwo sosi yefaera iyo inobatsira kugadzirisa kufamba uye kubvisa cholesterol kubva muropa zvakasikwa, kuburikidza netsvina. Kuti nzungu dzibatsire kudzikisa cholesterol, zvinokurudzirwa kutora chitsama chingangosvika magiramu makumi mana pazuva uye kunyanya mangwanani.
Zvekudya zvine fiber yakasviba zvinoshanda zvakanyanya kana uchiedza kudzikisa cholesterol. Izvi imhaka yekuti chinhu ichi chinotadzisa cholesterol kupinda muropa. Iwe unogona kuwana yakasviba fiber mune zvekudya senge oats, nyemba, mimwe michero, bhari kana mazambiringa akaomeswa. Mukombe weoatmeal pazuva unopa magiramu matanhatu efaibha, kana iwe ukawedzera muchero, iwe unowedzera mamwe magiramu mana.
Omega-3 mafuta acids
Kudya hove dzakapfuma mu omega-3 fatty acids uye zvimwe zvekudya zvine chinhu ichi zvinokubatsira kudzora ropa cholesterol. Izvi zvinodaro nekuti omega-3 iri inhibitor yeiyo enzyme inogadzira cholesterol, inova mubatsiri ane simba muhondo iyi yehutano hwetsinga dzako. Zvimwe zvekudya zvakapfuma mu omega-3s imbeu nenzungu.
Kudya pakati pehafu yeavocado uye chidimbu chakazara pazuva muchikafu chikuru zvinogona kukubatsira kudzikisa cholesterol yako. Avocado chikafu chakapfuma kwazvo mu fiber, icho chinobatsira kudzikisa kunwa kwecholesterol. Kune rimwe divi, icho zvakare chikafu chine yakakwira zvemukati me polyunsaturated fatty acids uye zvimwe zvinhu zvinoderedza ura kunyudza cholesterol.
Izvi zvekudya zvine zvinhu zvinodzikamisa kuiswa kwecholesterol muropa, zvisinei, kudya kwakasiyana uye kwakaringana kudya ndiyo kiyi yekudzora cholesterol. Hazvibatsiri kana iwe ukasuma izvi zvekudya kana zvisiri unodzora kudyiwa kweawo anokuvadza zvakanyanya. Zvigadzirwa zveSugary, mafurawa, zvinwiwa zvine munyu kana kutemwa kunotonhora ndizvo zvekudya zvinokuvadza zvakanyanya kana zvikadyiwa zvakapfurikidza
Ita maekisesaizi nguva dzese, inwa marita maviri emvura pazuva uye uteedzere kudya kwakasiyana siyana, zvakapfuma muzvikafu zvechisikigo, zvine mafuta mashoma, uchibvisa zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakanyanya, Izvo zvinokubatsira iwe kwete chete kudzikisa cholesterol, asi zvakare kutungamira hupenyu hwakawanda hune hutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Chikafu chinokubatsira kudzikisa cholesterol
Massimo Dutti anounza imba nyowani yekutsikisa SS21: Zvinhu zvakasikwa